टिम रारा, नेपाल डोनाष्टि कपमा - Namasteholland, News, Information and Technology
टिम रारा, नेपाल डोनाष्टि कपमा
२२ असार २०७५, शुक्रबार ११:५२08
कैयौ महिनाको मेहनत र चुनौतीलाई पार गर्दै टिम रारा, बार्सिलोना, स्पेन आएको छ ।पश्चिम हिमाली विकट जिल्लाहरू मध्य एक-मुगु जिल्लाका ती साना नानीहरू यहाँसम्म पुग्नु एकदम ठूलौ प्राप्ती हो। सुनकली फिल्म तथा टिम राराका निर्देशक भोजराज भाट, क्लबका अध्यक्ष प्रकाश शाही, प्रशिक्षिका भगवती राना लगाएत यस टिममा आवद्ध सबै व्यक्तीहरू प्रति हामी एकदम आभारी छौं । उहाँहरूको यो महान् योगदान र प्राप्ती हामी सम्पूर्ण नेपालीहरुको गौरवको बिषय हो ।
जब भोजराज भाटले सन् २०१५ मा सुनकली नामक बृतचित्र बनाएका थिए । यसको प्रभाबका कारणले नेपालको एक विकट पहाडि जिल्लाका किशोरीहरु बिदेश गई फुटबल खेल्ने मौका पाउछन् भन्ने कुरा त उनले सोचेका पनि थिएनन् होला। तर आउदो जुलाई महिनामा त्यो कुरा सत्यतामा परिणत हुदैछ र हाम्रा बहिनीहरु स्पेनमा गई प्रतिष्ठित प्रतियोगितामा भाग लिदै छन्।
भाटले बनाएको बृतचित्रमा नेपालको मुगु जिल्लाका नानीहरु – खेल मैदानको अभाब र हिउँले ढाकिएको पहाड हुदाँहुदै पनि फुटबल खेल्न कति लालायित छन् भनेर देखाईएको थियो। यस वृतचित्रको प्रभाव अन्तराष्ट्रिय फुटबल संगठन, फिफामा पनि पर्यो- जसले फेरि मुगु जिल्लाका नानीहरुको बारेमा- Meet the Himalayan Messi नामक बृतचित्र बनायो।
तथ्यांकको आधारमा हेर्ने हो भने मुगु जिल्ला- नेपालमा निकै पछि परेको जिल्ला मानिन्छ, र खासगरी महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा त झनै पछाडि रहेको छ। धेरै केटिहरुको यहाँ १८ बर्ष नपुग्दै बिबाह हुने गर्छ र त्यसपछि बिधालय जाने क्रम पनि टुट्ने गर्दछ। तर फुटबलका कारण, महिलाहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण देखि लिएर, उनीहरुको स-शक्तिकरणको कुरामा- सानो रुपमा भएपनि-केहि सकारात्मक प्रभाब परिरहेको भाट बताउँछन्।
अहिले बिश्वकप फुटबलको चर्चा चारैतिर हुँदै गर्दा, मुगुका यी बहिनीहरु भने स्पेनमा हुन लागिरहेको डोनाष्टि कपमा भाग लिई राम्रो प्रर्दशन गर्न मिहिनत गरिरहेका छन्।
(साभार-एस वि एस)
थप सुचनको लागि
२२ माघ २०७५, मंगलवार १६:३२011
पोर्चुगलमा २०४औँ भानु जयन्ती बिशेष बाल कविता तथा चित्रकला प्रतियोगिता भव्यरुपमा सम्पन्न ।
२६ असार २०७५, मंगलवार १७:४९011
४ आश्विन २०७५, बिहीबार १६:२४011
Hey Buddy!, I found this information for you: "टिम रारा, नेपाल डोनाष्टि कपमा". Here is the website link: https://www.namasteholland.com/%e0%a4%9f%e0%a4%bf%e0%a4%ae-%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2-%e0%a4%a1%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a4%bf-%e0%a4%95/. Thank you.